China 800w Light Brightstar Led Stadium Light China Manufacturers & Suppliers & Factory
Elu Bay ìhè
UFO Ada Elu Bay
Mgbanwe Ngwunye nke Mmiri nke Ọkpụkpụ
Echichi na-ehichapụ ya
Okwunyere Ogwe Ndị Na-echekwa Ọdụm
Ejiri Lightbox Shoebox
Ihe nnweta ozuzu ọkụ
Ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ
Mbara Igwe Ochie
High Bay Retrofit ikanam
Iju Mmiri Iju Mmiri
 Tel：86--18318810054 Email：info@bbier.com
Ụdị ahịa:Manufacturer , Service , Trade Company
Ahịa isi: Africa , Americas , Asia , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide
Onye na-emepụta ihe:91% - 100%
N'ezie:ISO9001, CB, CCC, CE, EMC, ETL, FCC, RoHS, Test Report, TUV, UL
Elu Bay ìhè >
150 Watt Led High Bay Light
200 Watt Led High Bay Light
100 Watt Led High Bay Light
60w Led High Bay Light
Led Corn Bulbs >
Led Corn Lamp
Mgbanwe Ngwunye nke Mmiri nke Ọkpụkpụ >
250w Metal Halide Led Replacement
175w Metal Ride Replacement
100w Metal Ride Replacement
Echichi na-ehichapụ ya >
Egwuregwu na 250 Watt HID
Ebube Ogologo >
Uhie Post elu
Okwunyere Ogwe Ndị Na-echekwa Ọdụm >
Ejiri ụgbọala na-echekwa ọkụ ọkụ
Okpomọkụ na-adọba ụgbọala na-adọba ụgbọala
Ejiri Lightbox Shoebox >
Ejiri akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ
Ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ >
Ejiri Ike Mmiri 150 Watt
60w Na-ekpuchi Ìhè
Mbara Igwe Ochie >
100w Sunlight Street Light
30w Sun Street Street
20w Ụzọ Mbara Igwe
Ibu Ọrụ >
Umu Obu Obu Uhie
Okpomiri Okpomiri Uhie
Ejiri Ije Ozi
Mgbidi Mgbidi >
Ime Ụlọ Mgba
Enwụrụ Led Wall Light Fixtures
Agbanyere ya n'igwe
Enwusi Ìhè >
2x4 Na-enwusi Ìhè
2x2 Na-enwusi Ìhè
1x4 Na-enwusi Ìhè
Iju Mmiri Iju Mmiri >
200w Mmiri Iju Mmiri
Mmiri Iju Mmiri 100 Lt n'èzí
50 Watt ekpuchire Iju Mmiri N'èzí
Egwuregwu egwu >
Egwuregwu Egwuregwu Football
Ogige ọkụ bọmbụ
Elu Bay ìhè
Led Corn Bulbs
Mgbanwe Ngwunye nke Mmiri nke Ọkpụkpụ
Echichi na-ehichapụ ya
Okwunyere Ogwe Ndị Na-echekwa Ọdụm
Ejiri Lightbox Shoebox
Ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ
Mbara Igwe Ochie
Iju Mmiri Iju Mmiri
800w Light Brightstar Led Stadium Light - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka 800w Light Brightstar Led Stadium Light)
BrightStar 800W Ọpụpụ LED Stadium Light Light
Nkwakọ ngwaahịa: 1pcs / CTN
Inye Ike: 300000pcs per month
Min. Nhazi: 1 Piece/Pieces
Nsonaazụ a dị elu BrightStar 800W n'èzí LED Stadium Light nwere ọnụ ọgụgụ 65,000lumens. Light 800W BrightStar N'èzí LED Stadium Light dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na ebe egwuregwu bọọlụ. Nnukwu nnukwu ọkụ ọkụ 800W...
5000K 200W UFO High Bay Lighting
Nkwakọ ngwaahịa: 1pc / CTN
Inye Ike: 500pcs a week
Min. Nhazi: 1 Bag/Bags
200W UFO High Bay Lighting 5000K 1. Eduzi nkuzi elu bay A na-eji ya eme ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, ama egwuregwu Indoor, ụlọ mmepụta ihe, ụlọ ebe a na-edebe ihe, ụlọ ahịa 2. Australia duuru ufo elu bay IP65 waterproof maka iji ya, mmiri na uzuzu na-eguzogide. 3. 200W ụlọ ọrụ na-enye ọkụ bụ ọmarịcha ọhụụ....
100W 5000K UFO High Bay Lighting
100W 5000K UFO High Bay Lighting 1. 100W ada akwa mmiri fiust australia A na-eji ya eme ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, ama egwuregwu Indoor, ụlọ mmepụta ihe, ụlọ ebe a na-edebe ihe, ụlọ ahịa 2. 100W ufo highbay alibaba IP65 na- egbochi mmiri maka iji ya eme ihe, mmiri na uzuzu na-eguzogide. 3. butere ufo light...
Lighting 150W UFO High Bay Lighting 5000K
Lighting 150W UFO High Bay Lighting 5000K 1. 150W ada elu bay UFO A na-eji ya eme ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, ama egwuregwu Indoor, ụlọ mmepụta ihe, ụlọ ebe a na-edebe ihe, ụlọ ahịa Mpempe mmiri 2.IP65 maka iji mpụga, mmiri na ájá na-eguzogide. 3. alibaba led high bay light is new mara imewe. Obere na olu...
100W UFO High Bay Lighting 110V
100W UFO High Bay Lighting 110V 1.5000K 100W ufo ledatara na-eji ọkụ n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, ama egwuregwu Indoor, ụlọ ọrụ, ụlọ nkwakọba ihe, nnukwu ụlọ ahịa. 2. 100W ufo dị elu na-enwu ọkụ IP65 na-egbochi mmiri maka iji ya, mmiri na uzuzu na-eguzogide. 3. LED HighBay Light 150W bụ ihe ọhụụ mara mma. Obere...
110VAC 150W LED UFO Light Bay Lightlight
110VAC 150W LED UFO Light Bay Lightlight 1.5000K 150W ufo ledatara na-eji ọkụ n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, ama egwuregwu Indoor, ụlọ ọrụ, ụlọ nkwakọba ihe, nnukwu ụlọ ahịa. 2. 150W ufo ọkụ nwere nko ngọngọ IP65 na-eji mmiri eme ihe maka mmiri, mmiri na uzuzu na-eguzogide. 3. LED High Bay Light 150W bụ ọmarịcha...
130lm / w 200W UFO High Bay Lights
200W UFO High Bay Warehouse LED Light 1. duru ufo oku ihe A na-eji ya eme ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, ama egwuregwu Indoor, ụlọ mmepụta ihe, ụlọ ebe a na-edebe ihe, ụlọ ahịa Mpempe mmiri 2.IP65 maka iji mpụga, mmiri na ájá na-eguzogide. 3. 200W UFO High Bay Lights bụ ihe ọhụụ mara mma. Obere na olu dị...
200W Motion Ihe mmetụta UFO High Bay Lighting
200W Motion Ihe mmetụta UFO High Bay Lighting 1. Motion Sensor UFO High Bay Lighting A na-eji ya eme ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, ama egwuregwu Indoor, ụlọ mmepụta ihe, ụlọ ebe a na-edebe ihe, ụlọ ahịa Mpempe mmiri 2.IP65 maka iji mpụga, mmiri na ájá na-eguzogide. 3. UFO duziri ulo oru oku ohuru bu ihe omuma...
277VAC 5000K 100W UFO High Bay Lighting
277VAC 5000K 100W UFO High Bay Lighting 1.5000K 100W ufo ledatara na-eji ọkụ n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, ama egwuregwu Indoor, ụlọ ọrụ, ụlọ nkwakọba ihe, nnukwu ụlọ ahịa. Mpempe mmiri 2.IP65 maka iji mpụga, mmiri na ájá na-eguzogide. 3. ufo high bay lighting bụ ọhụụ mara mma. Obere na olu dị ntakịrị, na-adigide...
50W Anyanwụ Post Light Fi ọkụ
Nkwakọ ngwaahịa: 1pc / igbe
50W Anyanwụ Post Light Fi ọkụ N'oge mgbede, ọkụ ọkụ W Wlar nke 50 W ga-agbanye na-akpaghị aka ma na-enwu ọkụ na-acha ọcha site na iko mmiri ozuzo na nchapụta 140 lumens na ụgwọ zuru oke nke anyanwụ. Nke a dugara Solar Post ebe ìhè ga-atụgharị na-akpaghị aka mgbe anyanwụ na-aga ala na uche anya mgbe anyanwụ na-abịa...
Oke akara 20W Anyanwụ Led Post Top 5000K
Oke akara 20W Anyanwụ Led Post Top 5000K Nkọwapụta: 1) Isi mmalite ọkụ: SMD3030 2) Flux Luminous: 150Lm / w 3) Mmiri agbakwunyere: 20W 4) Ntọala: Waji pin abụọ 5) Beam Angle: 120 Celsius 6) Certi.:CE,ROHS 7) IP Rating: IP65 8) Akwụkwọ ikike: afọ 3 Njirimara: 1. 20W butere anyanwụ post top USA Ike nchekwa, nchekwa...
30W Garden Light Fittings Florida Dubai 5000k
Inye Ike: 30000pcs per month
Osisi 30w Garden Light Florida polo na-akwado nkwado dabara adaba osisi 3 3/8 inch OD tenon & 3 inch. Na mgbakwunye, nke a Garden Light Dubai na-akwado ntinye ọkụ ọkụ nke AC100-277V dị ugbu a, ma e jiri ya na 100W metal halide light bulbs, chekwaa 90% nke ụgwọ ọkụ eletrik. Igwe ọkụ Light Garden a jiri IP65 mkpuchi...
30W Garden Light Post Dochie Bulbs na Polo
Nnukwu ọgbụgba ọkụ ọgbụgba ọkụ ọgbụgba ọkụ ọkụ 30w na-etinye nkwado na-akwụ ụgwọ na -eme ka ọ bụrụ ogwe osisi 3 3/8 inch OD tenon & 3 inch. Na mgbakwunye, Ogige Ubi a na .kwụ na-akwado ntinye ọkụ ọkụ nke AC100-277V dị ugbu a, ma e jiri ya na 100W metal halide light bulbs, chekwaa 90% nke ụgwọ ọkụ eletrik. Ogige...
50W Garden Light Post 65000LM 4000K
Ulo Oru nke Ugbo 50w nkwado na-akwụkwụ poodu kwesiri ekwesi 2 3/8-inch OD tenon & 3 inch. E wezụga nke a, Ìhè Ahịrị Udiri ala na-akwado ntinye ọkụ dị na AC100-277V dị ugbu a, ma e jiri ya na 200W metal halide light bulbs, chekwaa ihe ruru 90% nke ụgwọ ọkụ eletrik. Igwe ọkụ a nwere nchekwa Walmart jiri IP65...
30W Garden Light Light 39000LM 5000K
Ogwe osisi ọgbụgba ọkụ n'ọdọ ụlọ nke 30w na-akwụ ụgwọ na-akwado kwekọrọ na 3 3/8-inch inch OD tenon & 3 inch osisi. Na mgbakwunye, nke a Garden Light Atlanta na-akwado ntinye ọkụ ọkụ nke AC100-277V dị ugbu a, ma e jiri ya na 100W metal halide light bulbs, chekwaa 90% nke ụgwọ ọkụ eletrik. Echiche a nwere ìhè...
50W Led Garden Lighting Posts 6500LM
Anyị 50w Dugara Garden Ìhè Amazon nkwado na-akwụkwụ poodu kwesiri ekwesi 2 3/8-inch OD tenon & 3 inch. Na mgbakwunye, ihe ndozi nke Ọgba Atụrụ Led na-akwado ntinye ọkụ dị na AC100-277V dị ugbu a, ma e jiri ya na 200W metal halide light bulbs, chekwaa ihe ruru 90% nke ụgwọ ọkụ eletrik. Posts Led Garden Light Posts...
Light Bulbs n'èzí Ogwe Ọdụ 30W 39000LM
Ìhè 30w Ibe Gị Maka Ubi n’ime nkwado na-akwụkwụ poodu kwesiri ekwesi 2 3/8-inch OD tenon & 3 inch. E wezụga nke a, Ejiji Egwu Ndị Anwụrụ Anwụ na-akwado ntinye ọkụ ọkụ nke AC100-277V dị ugbu a, ma e jiri ya na 100W metal halide light bulbs, chekwaa 90% nke ụgwọ ọkụ eletrik. Igwe ọkụ a na-acha odo odo nke Led ji...
30W niile n'ime Otu Anyanwụ Led Street Light
Inye Ike: 50000pcs a week
Igwe ọkụ anyanwụ anyị nke 30w Street na- abịa na mgbawa dị elu-lumen leds, 30W nke ike LED, ultra-shine 3450Lm, 5000k, nnukwu arụmọrụ nke ìhè. Nke a Solar Dugara Street nwere ike a uto atụgharị na n'abalị (inyoghi inyoghi mode), gbanyụọ na ala na-amalite na-ana. Ihe niile dị na One Led Street Light t na- egosipụta...
30w Lithium Solar Sensor Street Light 5000K
Light 30ens Solar Sensor Street Light anyị na- abịa na mgbawa ọkụ-lumen leds dị elu, 30W nke ike LED, ultra-shine 3450Lm, 5000k, nnukwu arụmọrụ nke ìhè. Nke a 30w Solar Street Light nwere ike uto gbanye n’abali (ọnọdụ adịghị mma), gbanyụọ ya n’isi ụtụtụ wee bido ịgba ụgwọ. The Lithium Solar Street Light t on on...
Automatic Solar Light Street Light 30W 5000K
Ejiri ọkụ ọkụ ọkụ 30w Solar Street anyị na- abịa na mgbawa ọkụ, lumen 30W nke ike ọkụ, ultra-shine 3450Lm, 5000k, nnukwu arụmọrụ nke ìhè. Nke a Automatic Solar Street Light ike uto gbanye n'abalị (ọnọdụ adịghị), gbanyụọ mgbe chi bọrọ wee malite ịgba ụgwọ. The Solar Light Street Light t on on na-egbuke egbuke mode...
Light Light Led Street Light na Solar Panel 30W
Light 30w Led Street Light anyị na Solar Panel na- abịa na mgbawa dị elu-lumen leds, 30W nke ike LED, ultra-shine 3450Lm, 5000k, nnukwu arụmọrụ nke ìhè. Nke a Best N'èzí Solar Street Ìhè nwere ike a uto atụgharị na n'abalị (inyoghi inyoghi mode), gbanyụọ na ala na-amalite na-ana. The Street Oriọna Solar t on...
30W Light Solar Energy Led Street Light
Igwe ọkụ anyanwụ anyị 30w Integrated Solar Led Street na- abịa na mgbawa na-lumen leds dị elu, 30W nke ike LED, ultra-shine 3450Lm, 5000k, nnukwu arụmọrụ nke ìhè. Nke a Home ebusa Solar Street Ìhè nwere ike a uto atụgharị na n'abalị (inyoghi inyoghi mode), gbanyụọ na ala na-amalite na-ana. The Solar Energy Street...
Ihe niile dị na One Solar Panel Street Light 30W
Igwe ọkụ anwụ dị ọkụ nke 30w Street Light -lumen leds mgbawa, 30W nke ike LED, ultra-shine 3450Lm, 5000k, nnukwu arụmọrụ nke ìhè. Ihe ndị a niile dị na Solar Light 30w nwere ike uto gbanye n'abalị (ọnọdụ adịghị), gbanyụọ n'ụtụtụ wee malite ịgba ụgwọ. The Smart Solar Street Light t on on na-egbuke egbuke mode...
30W Kachasị mma Solar Street Light 5000K
Anyị 30w Solar Street Ìhè Home ebusa na-abịa na elu-lumen LEDs mgbawa, 30W nke Ikanam ike, na àjà ihe ọṅụṅụ-egbuke egbuke 3450Lm, 5000k, a oké arụmọrụ nke ìhè. Nke a na Solar Street Light Light Amazon nwere ike uto gbanye n'abalị (ọnọdụ adịghị), gbanyụọ n'isi ụtụtụ wee malite ịgba ụgwọ. The Best Solar Street...
100 Watt Led Corn Bulb Dimmable 13000LM
300 Watt Led Shoebox Light Fitfit 39000LM
150 Watt n'èzí na-eburu na-echekwa ogwe ọkụ nke ọkụ
Ụlọ ọkụ na-enwu ọkụ ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ na-agba 100 watt
ETL DLC Diana Gas Station ọkụ 130Watts 5000K
240W UFO High Bay LED ọkụ 5000K
150W N'èzí n'èzí Post Top Light Fixture 19500lm
DLC 75W Led Post Top Light Fittings
UFO ikanam ọkụ 200Watt 5000k 26000lm
80W N'elu nchekwa Backyard Iju Mmiri ọkụ
25W Anyanwụ na-akwado kwadoro elu 18V
100W Azụmahịa na-adọba ụgbọala n'ọdụ ụgbọ mmiri
120W Led Corn Cob Retrofit Bulbs E27
E26 80 Watt Led Corn Bulb 10400LM 5000K
200W Ubuu UFO Led High Bay Light Bulbs
150W Ebube Oke Mmiri Nke Elu Bay
100W Gburugburu Gburugburu Ebumnuche Mmetụta Dị Elu Bay
100W N'èzí na-agba ọsọ ụgbọala ụgbọala ụgbọala ụgbọala
800w Light Brightstar Led Stadium Light 800W Light BrightStar LED Stadium Light 500W BrightStar LED Stadium Light Lighting Led Stadium Lighting 800W BrightStar Ọpụpụ LED Stadium Light Light 800w High Mast Stadium Light 640 Watt Led Stadium Light 500W BrightStar Ọpụpụ LED Stadium Light
Copyright © 2020 Shenzhen Bbier Lighting Co., Ltd Ikike niile echekwala.